November 14, 2017 Aung Toe	Bagan, Myanmar, Travel Tuesday
MOUNT VICTORIA TRIP PLAN ဒီတစ်ခါ #TravelTuesday အနေနဲ့ ချင်းပြည်နယ် နတ်မတောင်တက် ခရီးစဉ်လေးကို ပြောပြပေးပါမယ်။ နတ်မတောင်ကို Mount Victoria လို့လည်း လူသိများပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတတိယ အမြင့်ဆုံးတောင်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝ ငှက်အမျိုးအစားမျိုးစုံကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး တစ်ချို့ငှက်တွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ ရှိတာပါ။ ရှားပါး သစ်ခွပန်းတွေ သစ်ပင်မျိုးစိတ်တွေကိုလည်း တွေ့ရဦးမှာပေါ့။ ရန်ကုန်ကနေ ပုဂံကို အရင်သွားရမှာဖြစ်ပြီး ပုဂံကနေမှ ကန်ပက်လက်ကို ကားထပ်စီးရမှာပါ။ ကန်ပက်လက်ရောက်ပြီး နောက်နေ့မနက်ကစလို့ ခရီးစဉ်စပြီပေါ့။ ဘာတွေတွေ့ရမလဲ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ရွာသေးသေးလေးတွေကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒေသခံတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ လူနေမှုစရိုက်တွေ အနေအထိုင်တွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဖော်ဖော်ရွေရွေရှိကြပါတယ်။ ပါးရဲထိုးထားတဲ့ မိန်းမတွေကတော့ မျိုးဆက်ပြတ်နေပါပြီလို့ သိရပါတယ်။ ချယ်ရီပင်တွေ ဒေသအစားအစာတွေကလည်း ရန်ကုန်က လာတဲ့သူတွေအဖို့တော့ …
Read the full post →“နတ်မတောင် ခရီးစဉ်”
burma, chin state, hilly region, mount victoria, Travel, trekking
May 16, 2017 Aung Toe	English, Travel Tuesday
Inya lake is the biggest lake that borders2of the main artery roads in Yangon, Pyay Road and Kabar Aye Pagoda Road. On Either side of the bank of the lake, it is always bustling with youth and energy where the youth of Yangon would come for dates or the older generation would come …
Read the full post →“Paddle Boarding in Inya Lake”
LeaveaComment on Paddle Boarding in Inya Lake
April 11, 2017 Aung Toe	English, Gallery, Travel Tuesday
foodie, navigator, YOLOLeaveaComment on Type of Travelers You Might Encounter
March 29, 2017 Aung Toe	English, Recommendation, Travel Tuesday
These beach hideaways are still undiscovered, unique, understated and still hidden under the radar. Summer is here and you just want to escape to the beach for cool breeze and time in the ocean. The problem is you won’t be the only one with the same idea. Too many people will flock in at the …
Read the full post →“5 Beach Hideaways in Myanmar”
115 island, beach, burma, harris island, hideaways, lay kyun, myanmar, nyaung oo phee island, tanintharyi, victoria cliff resortLeaveaComment on5Beach Hideaways in Myanmar